खोलामा बस खस्नुको कारण खुल्यो, सिंगो गाउँ यसरि डुब्यो शोकमा ! यी होनाहार युवाहरुले बचाए धेरैको ज्यान – ईमेची डटकम
खोलामा बस खस्नुको कारण खुल्यो, सिंगो गाउँ यसरि डुब्यो शोकमा ! यी होनाहार युवाहरुले बचाए धेरैको ज्यान
Posted byईमेची डेक्स November 5, 2019 December 11, 2019 Leaveacomment on खोलामा बस खस्नुको कारण खुल्यो, सिंगो गाउँ यसरि डुब्यो शोकमा ! यी होनाहार युवाहरुले बचाए धेरैको ज्यान
दोलखाको शैलुङ गाउँपालिका मागा देउरालीबाट काठमाडौँका लागि छुटेको बा २ ख ७२४५ नं. को अरनिको यातायात प्रालिको बस चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नं ९ अरनिको राजमार्गस्थित सुकुटेमा दु*र्घटना हुँदा बस सुनकोशी नदीमा खसेको थियो । सो गाडीमा यात्रारत रहेका घा*इतेका अनुसार क्षमताभन्दा बढी लोड गाडी तीव्रगतिमा चलाएका कारण अनियन्त्रित भएर दु*र्घटना भएको हो ।
शो घ*टनामा घा*इते भएका मध्ये एक १३ बर्सिय बालक जीवन खड्काको अहिले धुलिखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनले आफुलाई दुर्घटना हुँदा केहि थाहा नभएको र उद्दार टोलीको सहयोगमा अस्पताल ल्याईएको बताएका छन्। संचारकर्मीसंग बोल्दै जीवनका काका सन्तोष खड्काले क्षमत भन्दा बढी यात्रुका कारण उक्त दु*र्घटना भएको बताएका छन्। साथै, उनले चालककै लापर्वाहीका कारण घटना हुन गएको बताए। बाँकि कुराकानी भिडियोमा हेर्नुस् :
भारत पठाउन लागिएका ४९ वटा गाईगोरु र ट्रकसहित झापामा २ जना प क्रा उ